ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုကို ရုတ်ချည်းအဆုံးသတ်လိုက်သည်။
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ထိုင်းအထူးသတင်း » ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုကို ရုတ်ချည်းအဆုံးသတ်လိုက်သည်။
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • အစိုးရသတင်းများ • ကနျြးမာရေးသတင်းများ • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • သတင်း • ထိုင်းအထူးသတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား
Thailand Pass သို့ ရုတ်ခြည်းအဆုံးသတ်
ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာ ဦးဆောင်သော အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် COVID-19 အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာနသည် ညသန်းခေါင်မှစတင်၍ ဝင်ခွင့်အစီအစဉ်အရ ခရီးသွားအသစ်များကို လက်ခံခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ COVID-19 အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟို (CCSA) သည် နိုင်ငံအတွင်း Omicron အမျိုးကွဲ အရေအတွက် မြင့်တက်လာမှုကို ကိုးကား၍ TEST&GO နှင့် Sandbox အပလီကေးရှင်းအသစ်များ (ဖူးခက် Sandbox မှလွဲ၍) အားလုံးအတွက် Thailand Pass ကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားရန် ယနေ့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါသည်။ . ယခုအချိန်အထိ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Omicron ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၆၀ ကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ခရီးသွားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာသူများ ပါဝင်သည်။ ဒေသတွင်း ကူးစက်မှုတစ်ခုလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
Thailand Pass QR code လက်ခံရရှိပြီးသော ခရီးသွားများ (လျှောက်ထားသူ 200,000) သည် ၎င်းတို့မှတ်ပုံတင်ထားသော အစီအစဉ်၏ တည်ဆဲအခြေအနေများအောက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
သို့သော်လည်း အစိုးရသည် အဆက်အသွယ်ခြေရာခံခြင်းအတွက် အစီအမံအသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားအားလုံးကို RT-PCR နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ၂ ကြိမ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် စမ်းသပ်မှုကို အစိုးရမှ သတ်မှတ်ထားသော အဆောက်အအုံများတွင် ပြုလုပ်မည် (အပိုကုန်ကျစရိတ် မလိုအပ်ပါ)။
မှတ်ပုံတင်အသစ်အတွက် Thailand Pass Quarantine (TEST&GO) မှ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် Blue Zone Sandbox ပရိုဂရမ်များတွင် နေထိုင်ခြင်းအောက်၊ 0000 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 22 ရက်၊ 2021 နာရီမှ စတင်၍ နောက်ထပ် အသိပေးချက်အထိ XNUMX နာရီမှ စတင်၍ လက်ခံတော့မည် မဟုတ်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ QR ကုဒ်ကို မရရှိသေးသော လျှောက်ထားသူများသည် ၎င်းတို့၏ Thailand Pass ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်/အတည်ပြုရန် စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အတည်ပြုပြီးပါက ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့မှတ်ပုံတင်ထားသော အစီအစဉ်အရ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
Phuket Sandbox ပရိုဂရမ်နှင့် Happy Quarantine အောက်တွင် Thailand Pass အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆက်လက်ဖွင့်ထားသော်လည်း အစိုးရက အခြေအနေအား အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။
Thailand Pass Test & Go ပရိုဂရမ်ကို နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်က စတင်ခဲ့ပြီး အန္တရာယ်နည်းပါးသော နိုင်ငံပေါင်း ၆၃ နိုင်ငံမှ ခရီးသွားများအား ကာလရှည် သီးသန့်ခွဲထားမှုမရှိဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Test & Go ခရီးသွားများသည် RT-PCR COVID-1 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုစောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင် သီးခြားနေထိုင်ရန် အတည်ပြုထားသော SHA+ ဟိုတယ်တွင် တစ်ညကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် ရုံးပိတ်ရက်အပြီးတွင် အစိုးရက အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။